Toeram-pivoahana ho an'ny vata fidiovana manara-penaka ho an'ny hetsika - ZNZK
Ny rafitra fidiovana fiarovana ny tontolo iainana ZNZK dia misy tobim-bovoka, vavahady fantsom-baravarana, fantsom-bovoka, tamba-jotra fantsom-bovoka, mpanangona fantsona, mpamindra fantsona, rafitra fanaraha-maso, sns.
Ny trano fidiovana banga dia karazana kabine. Ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry vokatry ny rafitry ny fidiovana dia afaka mitroka ny loto ao anaty trano fidiovana amin'ny endrika suction rivotra mba hahatratrarana ny tanjon'ny fikosehana. Izy io dia afaka mamonjy be ilay rano mamoaka. Ny trano fidiovana nentim-paharazana napetraky ny fanjakana dia 6L / ora, ary aorian'ny fakana ny fidiovana malalaka amin'ny tontolo iainana, dia latsaky ny 0,5L / ora ny famafana tsirairay; hamaha tanteraka ny toerana kely, tsy milamina ny rivotra, ary maimbo ny fidiovana fa tsy misy rano Ny fantsona dia niteraka olana toy ny tsy fahaizana mametraka kabine.
Raha ampitahaina amin'ny trano fidiovana nentim-paharazana dia manana tombony ny fitsitsiana rano, ny vokatra tsara amin'ny famosana, ny fifehezana ny fofona ary ny fametrahana azy mety.
◎ Ny efitrano fitantanana dia miaraka amina boaty fizarana ankapobeny, switch power, socket, varavarankely amin'ny jiro, tobim-baravarankely mifangaro (ho an'ny fitsaboana insulateur), fitoeran-drano madio ary boaty maloto, izay afaka manome ny filan'ny 2000 ka hatramin'ny 3000 ny olona ao anaty tontolo iainana tsy misy fidiran-drano ary tsy misy loto. Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny teny fanafanana sy ny fitehirizana hafanana, ary ny mari-pana manodidina dia -50 ° ka hatramin'ny 40 °
Teo aloha: Fivarotana fivezivezena fivezivezena fivezivezena dimy
Manaraka: Mpamatsy tranofiara fantsom-baravarankely malalaka seza enina
Toeram-pivoahana matevina azo entina
Amidy amidy ny tranofiara fitetezana trano fandraisam-bahiny
Toeram-pivoahana azo entina
Toeram-pivoahana azo entina amidy
Amidy amidy trailer